थाहा खबर: लकडाउनको स्वरुप फेरिँदै, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाए विज्ञलाई
लकडाउनको स्वरुप फेरिँदै, प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाए विज्ञलाई
काठमाडौं : चैत ११ गतेदेखि जारी लकडाउनको अवज्ञा हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छलफल थालेका छन्। लकडाउन अढाई महिना पुग्दै गर्दा जनजीवन संकटग्रस्त भएपछि अहिलेसम्मको समीक्षा र नयाँ विकल्पबारे प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार विज्ञहरुसँग संवाद गर्ने भएका हुन्।
'यो छलफलमा अहिलेसम्मको लकडाउनको समीक्षा हुनेछ। त्यसैगरी लकडाउनले पारेका प्रभाव र आगामी रणनीतिबारेमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुनेछ', थापाले थाहाखबरसँग भने, 'छलफलमा अर्थविद्, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, सामाजिक अगुवासहितका करिब २५ जनालाई बोलाइएको छ।
थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको मोडालिटीसहित अहिलेसम्मको अवस्थाबारे पनि विज्ञहरुसँग समीक्षा गर्ने छन्। 'लकडाउनको मोडालिटीमा पनि छलफल हुनेछ। सरकारले कोरोना संकटविरुद्ध जुध्न नयाँ रणनीति बनाइरहेका बेला विज्ञसँगको छलफलले केही निचोड दिनेछ', उनले भने, 'लकडाउनले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, भोलिको जोखिम र असरबारे पनि कुरा हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा विज्ञ समूहसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको थियो। त्यसको सुरुवात भएको छ।'
यो छलफलका लागि डा. लोचन कार्की, स्वर्णि वाग्ले र डा. भगवान् कोइरालासहितलाई बोलाइएको छश। यसअघि नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको स्वरुप फेर्ने तयारी गरिसकेको छ।
गत मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि लकडाउनको स्वरुप फेर्ने जिम्मेवारी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्‍वर पोखरेल नेतृत्वको समितिलाई दिएको छ। समितिले विदेशबाट ल्याउने नागरिकका लागि मापदण्ड बनाइसकेको छ भने लकडाउनको मोडालिटी फेर्नेबारे पनि छलफल अघि बढाइहरेको छ।
लकडाउनको स्वरुप फेर्ने तयारीसँगै पोखरेल नेतृतवको उच्चस्तरीय समितिले आवश्यक छलफल थालिसकेको छ। केही दिनयता काठमाडौंसहितका व्यापारीहरुले लकडाउनविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
बजेटले राहत नदिएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका निजी क्षेत्र अब लकडाउन हटाउनै पर्ने अडान लिएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले लकडाउन तत्काल हटाउनै पर्ने अडान लिएका छन्। लकडाउन पछिल्लो पटक जेठ ३२ गतेसम्मका लागि थपिएको छ।